के तपाईं बिहे गर्ने सुरसारमा हुनुहुन्छ ? हो भने, विशेष ध्यानदिनुहोस् यी ७ कुरामा !! | सुदुरपश्चिम खबर
के तपाईं बिहे गर्ने सुरसारमा हुनुहुन्छ ? हो भने, विशेष ध्यानदिनुहोस् यी ७ कुरामा !!
सुदूरपश्चिम खबर प्रकाशित : १२ पुष २०७८ १३:२४
केटा होस् या केटी हरेक कसैको जीवनमा बिहेपछि परिवर्तन आउँछ । यदि तपाईंको पनि बिहे भएको छ भने पक्कै पनि तपाईंलाई महसुश भएको हुनुपर्छ । बिहे अगाडि जस्तो हुनुहुन्थ्यो तपाईं बिहेपछि त्यस्तो हुनुहुन्न । जिम्मेवारी बढेसँगै तपाईं आफ्नो कामको समय बाहेक पहिलाकोजस्तै घरभन्दा बाहिर कम समय दिनुहुन्छ ।
आजभोलि सामाजिक संजालमा तपाईंका साथी वा चिनेका मित्रहरुको बिहे भएको, एन्गेजमेन्ट भएको, हनिमुनमा गएको फोटोहरु सेयर भएको देख्दा तपाईंको परिवारले पनि तपाईंलाई ‘चाँडो बिहे गर, उमेर ढल्किसक्यो’ भन्ने जस्ता प्रश्न सोध्नुहुन्छ। यस्ता प्रश्नको सामना तपाईंले गर्नैपर्छ।
यदि तपाई पनि बिहे गर्ने योजनामा हुनुहुन्छ भने तल दिएका ७ कामबारे जानकारी हुनु आवश्यक छ।
सम्बन्धमा रहँदा वा कसैसँग कतै डेटिङ्ग जाँदा त्यो मान्छे आफ्नो लागि ठिक छ या छैन् सो बारे थाहा हुन्छ। यौनविज्ञ, रिलेसनसीप विशेषज्ञ तथा लेखक डान माइकलले भन्छन्, ‘बिहे गरेपछि हरेक कोही खुसी हुन्छ र उसको जीवन परिवर्तन हुन्छ । सम्बन्ध यस्तो पक्रिया हो यसबाट तपाईं हामी सबैले गुज्रिनुपर्छ ।’
यस्तै मोनोविज्ञ फ्रान वाल्सिस भन्छन्, ’बिहे हुँदै गरेका जोडीले कमभन्दा कम १ पटक सम्बन्धको अनुभव गर्नु जरुरी छ । जसले भविष्यको यात्रा तय गर्छ ।
२.एक्लै या रुममेटसँग बस्‍नुहोस्
एक्लै वा रुममेटसँग बस्दा तपाईं धेरै कुरा सिक्न सक्नुहुन्छ । यस्तो गर्दा तपाईं आर्थिक र भावनात्मकरुपमा आफै आफैलाई तयार गर्नसक्नुहुन्छ । परिस्थितीसँग लड्नका लागि पनि तपाईं सक्षम हुन सक्नुहुनेछ । यस्तै एक्लै वा रुममेटसँग बस्दा घरको जस्तो सुविधा पाउनुहुन्न । जस्तै ः आमाको हातको खाना, धोएको कपडा, सफा घर, कोठा । जब तपाईं एक्लै बस्नुहुन्छ तब सबै काम तपाईं एक्लैले गर्नुपर्ने हुन्छ ।
३.आर्थिकरुपमा सबल हुनुहोस्
चाहे तपाईं जागिर गर्नुहोस् या अन्य कुनै कामबाट तपाईंले आम्दानी गर्नुहुन्छ। हरेक कसैले आर्थिक तवरबाट परिपक्व हुन जरुरी रहेको छ । यो बिहेभन्दा अगाडि नै हुनुपर्छ । आर्थिकरुपमा सबल हुनुको खास कुरा के हो भने बिहे पछि तपाईंलाई केहि समस्या आयो भने तपाईंले बिहे अगाडि कमाउनु भएको पैंसा वा आर्थिक कुराबाट उक्त समस्यासँग लड्न सक्नुहुनेछ ।
४. पार्टनरसँग झगडा गर्नुहोस्
विज्ञहरुको भनाइअनुसार बिहे अगाडि नै तपाईंको हुनेवाला जीवनसाथीसँग झगडा गर्नुहोस् । किनकी झगडाको समयमा तपाईंको पार्टनर कसरी सम्हालिनुहुन्छ ? कस्तो व्यवहार गर्नुहुन्छ ? यी यस्ता कुराहरु नै सफल विवाहको कुंजी हो ।
धेरै बेला तपाईको जीवनसाथीसँग केही कुरा मिसअंडरस्ट्यान्डिङ वा एउटै कुरामा अलग अलग धारणा आउँदा मतभेद हुनसक्छन् । यसैले आफ्नो हुने जीवनसाथीसँग स्वस्थ्यरुपमा झगडा गर्नुहोस् ।
यदि तपाईं अहिलेसम्म पनि कतै लामो यात्रामा घुम्न जानुभएको छैन् वा जाने योजनामा हुनुहुन्छ भने जानुहोस् । बिहे पछाडि जिम्मेवारी बढेसँगै त्यो योजना तपाईंको छुट्न सक्छ । कतै तपाईंको जीवनसाथी पनि घुम्नमा रुची राख्नुहुन्छ भने त बिहे पछाडि पनि घुम्न सक्नुहुन्छ ।
६ शौखीन हुनुहोस्
हरेका व्यक्तिको केही न केही बानी वा केहि कुरामा शौख हुन्छ । तर, कतिपय मानिसमा केही कुराको बानी वा शौखीन पनि हुँदैन् । तर ती मानिसहरुले सम्झिनुपर्छ कि बानी वा शौखले मान्छेलाई रमाइलो बनाउँछ । बिहेभन्दा पहिलो आफ्नो हब्बी बनाउनुहोस्, जस्तै दौड्नु, पढ्नु, लेख्नु, गीत सुन्नु आदि ।
आफ्नो मन परेको कुरा गर्नाले दिमाग स्वस्थ र तनाव पनि टाढा भाग्छ । यसले तपाईंको बिहेपछिको जिन्दगी राम्रो हुन्छ ।
७. साथी संगत बनाउनुहोस्
धेरैजसो त बिहे गरेपछि तपाईंको साथीसंगत बदलिन्छ । बिहेभन्दा अगाडि तपाईंका धेरै केटा–केटीसाथीहरु हुन्छन् तर बिहेपछि तपाईंको उनीहरुसँग कुरा कम हुन् थाल्छ । बिहेपछि पनि तपाईं आफ्नो साथीसंगत बनाउनुहोस् । जसले तपाईं परिवारसँगै घुम्न र बाहिर जान सक्नुहुन्छ । अन्नपूर्ण पोस्ट बाट सभार